Home » Vaovao momba ny fizahantany » Feo 55 ho an'i Afrika: nanambara fifaninanana fanoratana ny VisaFreeAfrica
#VisaFreeAfrica (VFA) dia nanolotra vao haingana ny fifaninanana fanoratana 55 Feo for a Visa Free Africa (55Voices4Africa), nanasa ny tanora afrikanina rehetra hizara tantara momba ireo fanamby natrehin'izy ireo tamin'ny dia lavitra intraontinanta.
Ny VFA dia fanentanana manerantany hanamorana ny fivezivezena ao Afrika tarihan'ny Kigali Global Shapers miaraka amin'ny National Aviation Services (NAS), mpamatsy tolotra fiaramanidina haingana indrindra amin'ny tsena vao misondrotra.
Kigali Global Shapers, vondrom-piarahamonina iray izay manana vina hamorona sehatra iarahan'ny tanora manentana ny fanavaozana sy ny fanovana dia nandefa ny fifaninanana amin'ny fanoratana mba hananganana fahatsiarovan-tena bebe kokoa amin'ny maha-zava-dehibe ny fahazoana visa afaka Afrika. Ity fampielezan-kevitra ity dia hanampy amin'ny endrik'ireo tanora afrikanina marobe izay manana fotoana tsy azony amin'ny sehatry ny fanabeazana, fizahan-tany, fahasalamana ary asa eo amin'ireo sehatra maro hivoarany.
Ny fifaninanana "55Voices4Africa" ​​dia misokatra ho an'ny teratany afrikanina rehetra 18 ka hatramin'ny 30 taona, miorina amin'ny firenena afrikanina rehetra.
Raha te handray anjara amin'ny fifaninanana dia tokony handefa tantara iray izay fitantarana mifototra amin'ny zavatra niainan'ny mpanoratra na olona iray izay fantany rehefa nizotra nankany na avy tany amin'ny firenena afrikanina iray izay nisy fizotrany nandreraka hahazoana visa.
Ny lahatsoratra dia tokony tsy mihoatra ny teny 1,000 amin'ny fomba fitantarana tsy fitantarana voasoratra amin'ny teny anglisy, frantsay, arabo na portogey.
Ny fe-potoana farany fandefasana dia 15 aprily 2019 amin'ny 11:59 PM GMT.
Ny tantara natolotra dia tokony ho asa tany am-boalohany, tompon'ny tompony rehetra, ary tsy manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, mari-barotra, tsiambaratelo momba ny fananana ara-tsaina na zon'olon-kafa avy amin'ny antoko sy lalàna ary lalàna mifehy.
Ireo mpandresy dia hambara amin'ny 30 aprily 2019.
Kalitaon'ny fiainana amin'ny taona 2019: Viena no tanàna tsara indrindra manerantany